व्यवसायीको हितको लागि कुनै पनि कसरत गर्न तयार छु – खड्का – Enayanepal.com
व्यवसायीको हितको लागि कुनै पनि कसरत गर्न तयार छु – खड्का
यातायात क्षेत्र राष्टको मेरूदण्ड हो । यातायात क्षेत्रको विकास नेपालमा विस्तारै हुदै गइरहेको छ । सुर्खेतमा पनि यातायात व्यवसायले फड्को मारिरहेको छ । मध्यपश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी संघको मिति २०७३ पुस २३ गते सम्पन्न ११ औं साधारणसभाबाट अध्यक्षमा निर्वाचित विष्णुबहादुर खड्कालाई बधाई दिंदै यातायात क्षेत्रमा भइरहेको विकास, सर्वसाधारण जनताले पाएको सुविधा लगायतका विषयमा हाम्रो नयाँ नेपालकर्मी नरजन तामाङले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, खड्कासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश- २० वर्ष लगाताररूपमा काम गरेका अनुभवका आधारमा नेपालको यातायात व्यवसायका चुनौति र सम्भावना के–के छन् ?
धेरै खालका अप्ठ्याराहरू झेल्नुप¥यो । हामीहरूले तत्कालिन अवस्थामा २२ वटा गाडीहरूबाट सुरू गरेको संस्था हो यो । अहिले हामीसँग ३ सय ८७ वटा साना–ठूला गाडीहरू छन् । तत्कालिन संस्था खोल्दाखेरीको अवस्थामा प्रत्येक व्यवसायीहरूबाट ७÷७ हजार रूपैयाँ व्यक्तिगत खल्तीबाट उठाएर एउटा कोष बनाएर संस्था दर्ता गरेको हो । तत्कालिन सुर्खेतदेखि नेपालगञ्ज, सुर्खेतदेखि काठमाडौ सुर्खेतदेखि कटुकासम्म र सुर्खेतदेखि बोटेचौर, सुर्खेतदेखि गिरीघाटसम्म मात्र बाटो बनेको थियो । तिनी रूटहरूमा यातायात सञ्चालन ग¥यौँ । संस्था खोल्दाखेरीको अवस्थामा नेपालगञ्जमा रहेको भेरी समिति अन्तरगत चलिरहेका थियौँ । पछि सुर्खेतमा पनि बाटोहरू खुल्दै छन्, यहाँ पनि व्यवसायीहरू पनि बढ्दै हुनुहुन्छ, व्यवसायीहरू बढ्ने क्रममा हुनुहुन्छ, हामीहरूले पनि सुर्खेतमा यातायात संस्था खोलौं भनेर खोल्यौँ ।
कुनै नयाँ व्यवसायीले तपाईको यातायातमा आउन चाहे भने के हुन्छ प्रक्रिया ?
पहिला सुर्खेत, दैलेख, जुम्ला, जाजरकोटका व्यवसायीहरूलाई इन्ट्रि गर्ने व्यवस्था गरेका थियौँ । अहिले दुई वर्ष अगाडी भएको साधारण सभाले अब नयाँ कुनै पनि व्यवसायीहरूलाई इन्ट्रि बन्द गर्ने र पुराना गाडीहरू कटिङ गर्ने संस्थाले निर्णय गरेको छ । गाडीहरू २० वर्ष पुगिसकेका छन् भने संस्थामा थन्काउने कटिङबापत् मिनी गाडीहरूलाई अढाई लाख रूपैयाँ र ठूला गाडीहरूलाई ३ लाख रूपैयाँ कटिङ गरेबापत् दिने निर्णय भएको छ । त्यही कटिङ गरी नयाँ व्यवसायीहरूले ल्याउनु भयो भने संस्थामा टोकन दिने र इन्ट्रि गर्छौ ।
तपाईको यातायात समितिले नेपाली यातायात क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानलाई कसरी संश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
हामीले नेपाली यातायात क्षेत्रमा गरेको योगदानहरूको विषयमा भन्नुपर्दा अहिलेसम्मको अवस्थामा सुर्खेतदेखि काठमाडौं, धरान, बिरगञ्ज, पोखरा, बुटवल, महेन्द्रनगर, धनगढी, टिकापुर, नेपालगञ्ज, जुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट, मुगु र अछाम, सुर्खेतको लगाम, बेतानसम्म र पूर्वको मालारानी तथा सुर्खेतको पूर्वी भेग सिम्ता, खानीखोला, डाँडाखाली र गुर्मीसम्म विभिन्न लोकल रूटहरूमा सेवाहरू दिईराखेका छौँ । म.प यातायातको बिमा पोलिसी कतिको प्रभावकारी छ । तपाईस“ग कति यातायात व्यवसायी आबद्ध छन् ? संस्थामा आबद्ध ३ सय ८७ वटा गाडीहरू, सबैको बिमा छ, राम्रैप्रभावकारी देखिन्छ ।
नेपाल सरकारको ट्राफिक नीति, कर्णालीमा रात्रीबस चल्न नदिने नीति, यातायातमा भएको चरम प्रतिस्पर्धा आदिका कारणले तपाईहरूलाई के–कस्तो असर परेको छ ?
सुर्खेतदेखि जुम्लाको रूटको वास्तविकता प्रतिस्पर्धाका कारण भन्दा पनि केही वर्ष अगाडी बाटो साँघुरो अनि कच्ची भएको अवस्थामा दुघर्टनाहरू बढी भए । तत्कालिन अवस्थामा सरकारले वा त्यतिखेर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँ मुगुको बाटोको उद्घाटनमा जानुभएको थियो । त्यतिबेला कालिकोटभन्दा अगाडी टिमुरे भन्ने ठाउँमा ठूलो बस दुर्घटना भएको थियो । त्यो दुर्घटनामा मलाई लाग्छ १२÷१४ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यही घटनालाई लिएर जबसम्म बाटो राम्रो अवस्थामा हुँदैन, तबसम्म रात्री सेवा सञ्चालन हुन नदिने भन्ने खालको प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेतले रात्री बस सञ्चालन गर्न नदिएको अवस्था हो । अहिले सडकका पहिलाभन्दा केही राम्रो सुधार भएको छ । हाम्रो व्यवसायीहरूको माग के छ भने अन्य ठाउँमा कुनै पनि रात्री सेवाका गाडी सञ्चालनमा रोक लगाउने छैन । सुर्खेत– जुम्ला क्षेत्रमा रात्री गडाीहरू बन्द गरिएका छन् । रात्री सेवालाई बन्द गर्नुभन्दा पनि बाटोलाई मर्मत गर्ने र बाटो राम्रो बनाउँदै जानुपर्छ । व्यवसायी र यात्रुलाई मर्का पार्ने काम तत्कालै बन्द गर्नुपर्छ । र रात्री सेवासहित सञ्चालन हुनुपर्छ ।
बसपार्कमा धेरै यातायातबीच दादागिरी मात्र गर्ने गरेको पाइन्छ । यसलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने योजना छ ?
त्यो बेकार हल्ला हो । उनीहरूले आफ्नो यातायात व्यवसाय चलाएका छन् भने हामी आफ्नो व्यवसाय चलाएका छौँ । आफ्नो आकर्षक सुविधायुक्त गाडीहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।
भर्खरै सम्पन्न साधारण सभाको निर्वाचनले तपाईको प्यानल निर्वाचित हुनुभएको छ । मप यातायातको भावी कार्यक्रमहरू के–के छन् ?
मेरो भावी कार्यकालको योजनामा व्यवसायीहरू अहिले मर्कामा छन् । प्रतिस्र्धामा छन् । धेरै गाडीहरू हामीसँग छन् । सकेसम्म व्यवसायीहरूलाई सुविधा दिने, प्रतिस्पर्धा भएपनि व्यवस्थित अस्वस्थ परिस्थितिलाई पनि स्वस्थ परिस्थिति बनाउने, अहिलेको बसपार्कको अवस्था एकदमै साँघुरो, सानो गाडी पार्किङ गर्न पनि नसक्ने अवस्था छ । हामी नयाँ बसपार्कमा स¥यौँ भने यात्रुलाई सेवा सुविधा दिने र आफ्ना गाडीहरू पनि पार्किङ गर्ने, अलिकति व्यवस्थितरूपमा सेवा सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने हामीकहाँ यात्रुहरू पनि आकर्षण हुने सम्भावना पनि छ । धेरै कच्ची बाटाहरू बनिराखेका छन् । रूटहरूलाई तिनी रूटहरूमा हिँडाल्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ । अहिले मात्र मैले आफैले नै व्यवसायीहरूले नयाँ गाडीहरू ल्याउनु हुन्छ । नयाँ च्यासिस ल्याउने व्यवसायीहरूले फाइनान्स गरेर नयाँ गाडीहरू टोकनबाट इन्ट्रि गरेर ल्याउने र पुराना सञ्चालनमा भईरहेका ति व्यवसायीहरू छन्, उहाँहरू टायर हाल्न नसक्ने, गाडी मर्मत गर्ने नसक्ने हुनुहुन्छ । त्यसैले अहिलेको साधारण सभाबाट सबै व्यवसायीको मागमा त्यो अवस्था देखेर मेरो आफ्नै व्यवसायबाट आफ्नै घर जग्गाहरू धितो राखेर वाणिज्य बैंकमा मैले ओडी बनाएको छु । त्यो ओडीबाट संस्थाको जिम्मामा मैले एक करोड रूपैयाँ व्यवसायीको हितमा कोष खडा गरेको छु । नयाँ योजना ल्याएको छु । त्यो योजनाले व्यवसायीहरूलाई केही राहत दिन सकिन्छ की व्यवसायलाई माथि उठाउन सकिन्छ की भनेर कोष खडा गरेको हुँ । जसले गाडी मर्मत गर्न सक्नु हुन्न, टायर किन्न सक्नु हुन्न, त्यस्ता व्यवसायीको लागि यो योजना ल्याएको हुँ, बाहिर सहकारी बैंकबाट ब्याजमा लिंदा तत्काल नपाइने, महङ्गो हुने भएकोले यो व्यवसायको हितमा हुने गरेको छ । विद्यमान अवस्थालाई राहत दिन संस्थाको विनियम बनाउँदै छु । त्यो विनियम बनाई सकेपछि अस्ति मात्रै २५ गते पद ग्रहण गर्दा समितिका कोषाध्यक्षलाई चेक हस्तान्तरण गरिसकेको छु, मेरो व्यक्तिगत घर जग्गा धितो राखेर ओडी खाताबाट ओडी सञ्चालन गरेको थिएँ । त्यही ब्याज संस्थाले तिर्ने गरी कम्तीमा ५वर्षको लागि तत्काल सापट दिएको छु ।
यातायात क्षेत्रमा २० वर्ष नेतृत्व गर्नुभयो । नयाँ सिर्जनशिल युवा नेतृत्व विकासका लागि सचेत देखिनुभएन किन ?
६÷७ वर्ष अगाडी म संस्थाको धेरैपटक अध्यक्ष भईसकेपछि आफ्नो पनि व्यवहारिक कारण व्यवसाय पनि गर्नुपर्छ साथीहरू तपाईहरू अगाडी बढनु होस् भनेर मैले २÷३ वटा साधारण सभामा कुरा राखेको पनि हो । साथीहरूको आग्रहअनुसार नै आजसम्म अध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको छु ।
तपाईको प्रतिस्पर्धी श्याम कँडेलले पनि म नेतृत्व लिन्छु भनेर अघि बढ्नु भएको थियो, किन दिन चाहनु भएन ?
विगतमा दुई वर्ष संस्थाभित्र केही विचलन भयो । व्यवसायीहरूको एकरूपता नहुने, संस्थामा विचलन खालको असर पर्ने आयो । व्यवसायीहरूले अब व्यवसाय धरापमा पर्ने अवस्था आउने खालको त्यहाँ कुराहरू उठे । चुनावी प्रचार–प्रसारमा अलि नराम्रा खालका गतिविधिहरू भए । यो मध्यपश्चिम यातायात समिति अरू एनजिओ ÷आइएनजिओजस्तो नभएको, मेरो पनि आफ्नो २÷३ करोडको गाडीहरू भएको कारणले अब आफ्नो सम्पत्ति कि मैले बेचेर साथीहरूलाई जिम्मा दिनुप¥यो । सबै व्यवसायीहरूले अध्यक्षले साथ दिनुपर्छ अझै पनि अध्यक्षज्यूको आवश्यकता छ भन्ने व्यवसायीहरूको माग आयो । मैले धेरै कुराहरू गरेँ, छलफलहरू गरेँ, व्यवसायीहरूले तपाईले छोड्नु हँुदैन । तपाईले २० वर्षसम्म संस्था चलाएको अनुभव छ । तपाई सक्षम नेतृत्व लिइरहनु भा’छ, संस्था अझै पनि आवश्यक छ भन्ने साथीहरूले माग राख्नु भयो । हामीले २२ वटा गाडीहरूबाट सुरू गरेका थियाँै अहिले ३ सय ८७ पुगेको अवस्था बीचमा सक्षम नेतृत्व गरे जस्तो लाग्छ ।
तपाई अध्यक्ष भए पनि बीचमा सामूहिक छलफल नहुने, व्यवसायीहरूको हितमा काम नहुने गुनासो छ ?
त्यो बेकार कुरा हो । सामूहिक हितमा काम गरेकै कारणले म अहिले यो अवस्थामा आएको हँु । एउटा व्यवसायीहरूको मागबाटै अत्यधिक बहुमतले मूल्याङ्कन गरेको छ । अझै पनि व्यवसायी हितको लागि कुनै पनि कसरत गर्न तयार छु । जस्तोसुकै चुनौती सामना गर्न तयार छु । व्यवसायीको हक, हितको लागि र संस्थालाई अगाडी बढाउनको लागि म जे पनि गर्न तयार छु । त्यही संकल्प गरेको पनि छु । त्यहीअन्तरगत साधारण सभामा केही कुरा बोलेको छु । कुरा पनि गरिसकेको छु । बसपार्कलाई व्यवस्थित गन र्छु , रोड काट्ने व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नुछ । एउटा अस्वस्थ परिस्थिति छ । देखिराखेको छु, विभिन्न संस्थाहरूसँग वार्ता गरेर सहजपूर्ण वातावरणलाई गाडीहरू सञ्चालन गर्न योजना छ ।
तपाईको यातायातका कर्मचारीहरूले यात्रुहरूलाई असहज परिस्थिति सिर्जना गरेका छन् । बाटोमा हिडेका यात्रुहरूका झोला तान्ने गरेका पाइन्छन् । त्यो कहिलेसम्म सुधार्नु हुन्छ ?
यात्रु तान्ने, झोला तान्ने, त्यो अवस्था त होइन । आफूले गाडी सञ्चालन गर्ने क्रममा यात्रुहरूलाई हाम्रो गाडी चढ्नु होस् भनेर बोलाउने गरेका छन् । यात्रुहरू तान्ने, झोलाहरू तान्ने गरेका छैनन् । बसपार्कमा टाफिक प्रहरीहरूले निगरानी गरिरहनु भएको छ । हामीहरूबाट त्यस्तो भएको छैन ।
अन्तमा व्यवसायीहरूलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?
व्यवसायीहरूलाई के छ भने साधारण सभासम्म भईसकेको छ । पद ग्रहण गरिसकेका छौँ, त्यसैले अब चुनौती के छ भने पहिला हाम्रो संस्था अरूभन्दा फरक छ । विभिन्न संस्थाहरूका गाडीहरू छन् । हामी व्यवसायीहरू एक भएर हिँड्न जरूरी छ । जुन निर्वाचन थियो, त्यो निर्वाचन प्रक्रिया सकिसकेको छ । हामीहरू सबै साथीहरू एक भएर एक मत अगाडी बढ्नु पर्छ । कुनै पनि चुनौतीलाई सामना गर्न सक्छौँ । पराजित साथीहरू ह्ुनुहुन्छ, एक भएर अघि बढ्नु पर्छ । संस्थाको हित र व्यवसायको हितको लागि हातेमालो गरेर एउटा सहकार्य गरेर अघि बढौँ ।